Medjugorje: byzọ nke Nwanyị nwanyị anyị gosipụtara iji nweta amara
Paolo Tescione	Edere ya June 25, 2020 June 25, 2020
Site na ntụle a nke ozi n'usoro oge, ọ ga-ekwe omume ịchọpụta ụzọ ekpere nke Nwanyị nwanyị anyị nke Medjugorje onye soro ndị ọhụ ụzọ, parish San Giacomo na ụwa niile mee, iji mee ka mmadụ niile mara banyere ịhụnanya na ngọzi nke Pụrụ Ime Ihe Niile.
A na-atụ aro ịgụkọ dị mkpa nke ozi ndị ebipụtara na ntụgharị uche na itinye ha n'ọrụ na ndụ Ndị Kraịst ka o wee nweta ezi ihe ọmụma banyere atụmatụ nke Mary, nne na Queen nke Udo, n'ime anyị niile.
Etu ị g’eme ka gị na Chineke na ndi agbata obi dịrị n’udo:
“Udo! Udo! Udo! Soro Chineke na nkpuru n’etiti onwe unu Na ime nke a, odi nkpa ikwere, ikpe ekpere, ibu onu na ikwuputa ”(June 26, 1981)
Etu esi ekpe ekpere site n’obi:
“Jiri obi gị niile kpee ekpere! Maka nke a, tupu ịmalite ikpe ekpere, rịọ mgbaghara ma gbaghara gị n'aka gị ”(Ọgọst 16, 1981).
Otu esi ewusi okwukwe na Chineke:
“Nọ penance! You ga-eji ekpere na oriri-nsọ mee ka okwukwe gị sie ike ”(8 Ọgọst 1981).
Otu esi ezere ikewapụ na di ya:
“Asị m: ịnọnyere ya ma nakwere nhụjuanya. Jizọs tara ahụhụ ”(29 Ọgọst 1981).
Tozọ Isi Zere Ike Setan:
“Setan nwara ịbido gị ike ya. Ekwela ya! Guzosie ike na okwukwe, buo ọnụ ma na-ekpe ekpere! "(November 16, 1981).
Etu ị ga-esi nweta ọgwụgwọ nke ndị ọrịa:
Ikpegara “Nna Anyị” ekpere Dị ka Nwanyị Nwaanyị ahụ mere na Disemba 30, 1981.
Etu esi enwe obi uto:
Ọ bụrụ n'ịchọrọ inwe ọ happyụ, nwee ndụ dị nwayọ na nwayọ. Kpee ekpere ma echegbula onwe gị banyere nsogbu gị: ka ha dozie Chineke ma hapụ onwe gị n'aka Ya! " (Jenụwarị 4, 1982).
Uzo esi enweta udo n’etiti ndi nchu aja:
"Na-ekpe ekpere ma na-ebu ọnụ maka udo ịchị achị n’etiti ndị ụkọchụ." (Jenụwarị 21, 1982).
Otu esi eme naanị ụzọ nzọpụta:
“Kpee ekpere, kpee ekpere! Kwere nkwenye, kwuputara oge niile ma kwurita okwu. Nke a bụ naanị ụzọ nzọpụta "(February 10, 1982).
Etu ị ga-esi nweta ụwa ịnabata ịhụnanya Mary:
"Kpee ekpere, ka ụwa nabata ịhụnanya m!" (Machị 1, 1982).
Etu esi egbochi agha ma kwụsịtụ iwu gbasara eke:
A na m akpọ gị oku ka i kpee ekpere ma buo ọnụ maka udo ụwa. Ichefuola na iji ekpere na ibu ọnụ, agha nwekwara ike iwepụ agha na kwụsịtụrụ iwu ebumpụta ụwa. Ọsọ kachasị mma bụ nke achịcha na mmiri "(July 21, 1982).
Etu ị ga -esi nweta ọgwụ maka Western Church:
“A ga-agba ndị mmadụ ume ka ha kwupụta ọnwa ọ bụla, karịchaa na Fraịdee mbụ ma ọ bụ Satọdee mbụ nke ọnwa. Mee ihe m gwara gị! Nkwupụta kwa ọnwa ga-abụ ọgwụ maka Western Church ”(6 Ọgọst 1982).
Etu ị ga-esi nweta graces niile:
“Na-ekpe ekpere! Kpee ekpere! Mgbe m gwara gị okwu a, ị gaghị aghọta ya. Enwere ike ịnabata onyinye gị niile, mana ịnwere ike ịnata ha site na ekpere ”(Ọgọst 12, 1982).
“Maka ọgwụgwọ nke ndị ọrịa, a chọrọ okwukwe siri ike, ekpere na-adịgide adịgide, yana onyinye nke ibu ọnụ na ịchụ-aja. Enweghị m ike inyere ndị na-anaghị ekpe ekpere ma ghara ịchụ ihe ụfọdụ aka "(18 Ọgọst 1982).
Otu esi enweta graces maka nsogbu anyị kwa ụbọchị:
“Iji nweta otuto, ihe kacha mkpa bụ ikwere siri ike, na -ekpe otu ụbọchị, na-ebu ọnụ na achịcha na mmiri na Fraịde. Maka ọgwụgwọ nke ndị ọrịa siri ike, kpeekwuru ọnụ ọsọsọ ”(20 Septemba 1982).
Etu ị ga-esi nweta ọgwụgwọ nke ụmụaka na-arịa ọrịa:
"Ka nwatakịrị ahụ na - arịa ọrịa nwee ike ịgwọ ọrịa, ndị mụrụ ya ga-ekwenye n'eziokwu, kpee ekpere, kpee ngwa ngwa ma megwara" (August 31, 1981).
Etu ị ga-esi nweta nchekwa nke Madonna:
“Kpee ekpere, kpee ekpere! Naanị otu a ka m ga - esi chebe gị! " (Machị 21, 1981).
Otu esi edozi nsogbu ọ bụla:
“Nsogbu ọbụla ị nwere, kpọọ m na aga m abịakwute gị ozigbo ma nyere gị aka idozi nsogbu ndị ahụ n’ụzọ kachasị mma” (Machị 4, 1982).
Uzo esi emeghachi omume nye ndi mmadu nsogbu
"Mgbe mmadụ nyere gị ihe isi ike, anwala ịgbachitere onwe gị, kama kpee ekpere" (Eprel 26, 1982).
Etu ị ga-esi nweta udo ụwa:
Worldwa nke taa na-ebi n'etiti ọgba aghara siri ike ma na-eje ije na njedebe nke ọdachi. Ọ ga-azọpụta ma ọ bụrụ na ọ chọta udo. Ma enwere ike nweta udo site na ịlaghachikwute Chineke ”(February 15, 1983).
Otu esi enweta ntughari nke ndi mmehie:
“Ọ ga-amasị m ka m mee ka ndị mmehie niile chegharịa, ma ha agbanweghị! Na-ekpe ekpere, na-ekpe ekpere maka ha! (Eprel 20, 1983).
Etu esi elezi ikpe ezi ikpe nke Chineke anya:
“Lee, nke a bụ ihe m chọrọ ịgwa gị: chigharịa!… Ana m ewetara Chukwu nke Chukwu ihe niile iji nweta na Ọ na-ebelata ikpe ziri ezi ya n’ebe ụmụ mmadụ na-eme mmehie nọ” (Eprel 25, 1983).
Otu esi enweta nsonaazụ obi ụtọ nke ọrụ anyị:
“Don't bughi n’ihe n’ọrụ, kama n’ekpekwa ekpere! Ọrụ gị agaghị aga nke ọma n'ebughi ekpere. Nye Chineke oge gị! Hapụ ya onwe gị! Kwe ka onwe gi site na Mmuo Nso! Mgbe ahụ ị ga - ahụ na ọrụ gị ga - adịkwa mma ma ị ga - enwekwu oge n'efu "(2 Mee 1983).
Otu esi eme ka Nwanyi anyi di nma:
“Obi ga-adị m ezigbo ụtọ ma ọ bụrụ na inyefe otu elekere n'ụtụtụ na elekere nke mgbede ikpe ekpere” (July 16, 1983).
Olee otu iji nweta mgbanwe n'ezie:
“Ihe kachasị mkpa bụ ikpegara Mmụọ Nsọ. Mgbe Mụọ Nsọ dakwasịrị gị, mgbe ahụ ihe niile ga - agbanwe wee pụta ìhè nye gị ”(Nọvemba 25, 1983).
Otu esi enweta ekele pụrụ iche:
“Nwee obi uto na aghara aghara Sakrament nke ebe ịchụ-aja (…) N’oge ahụ a na-enweta nsọpụrụiche pụrụ iche” (Machị 15, 1984).
Otu esi egbochi obi Meri ịkwa ákwá nke ọbara:
Biko, ekwela ka obim tie mkpu akwa nke obara n’ime mmehie. Ya mere, umuaka, kparanu ekpere, kpenu ikpe, kpee ekpere! ” (Mee 24, 1984).
Tozọ isi nweta ọrụ nke Chukwu gọzie:
Mụaka, ụmụ m, achọrọ m taa ka m gwa unu ka unu kpee ekpere tupu ọrụ ọ bụla ma were ọrụ niile mechie ekpere. Y’oburu na eme otua, Chukwu g’ agozi gi na oru gi ”(July 5, 1984).
Etu aga e nweta mmeri nke Kraist:
“You na-eche: kedu ihe kpatara ọtụtụ ekpere? Leenụ anya, ụmụ m, unu ga-ahụ oke mmehie nke juputara n’ụwa a. Ya mere kpee ekpere ka Jisos merie ”(13 Septemba 1984).
Otu esi enyere Maria aka ime ihe omume ya:
“Dearmụaka, ụmụ m, enyerela m aka n’ekpere gị iji rụzuo ọrụ m. Nọgide na-ekpe ekpere ka a rụchaa ọrụ ndị a kpamkpam ”(Septemba 27, 1984).
Otu esi ghọta ozi Medjugorje:
“You na amataghị ozi Chineke zitere gị site na m. Ọ na-ekele gị, ma ị naghị aghọta ya. Kpee n’ekpere nke mmụọ nsọ iji mee ka ị mara ihe ”(November 8, 1984).
Otu esi agba mbọ nwee obi ụtọ:
“Setan chọrọ ịrụ ọrụ ike karịa ka ọ ga-ewepụ ụfọdụ ọ joyụ gị. Site n'ekpere, ị nwere ike wepu ya kpamkpam wee mee onwe gị obi ụtọ ”(Jenụwarị 24, 1985).
Otu esi achọta ngwọta dị na ọnọdụ ọ bụla:
“N’ime ekpere ị ga - enweta ọ aụ dị ukwuu ma chọta ihe edozi maka ọnọdụ ọ bụla siri ike” (Machị 28, 1985).
Otu esi emeri ihe mgbochi niile:
"Site na Rosary ị ga - emeri ihe mgbochi niile nke Setan nọ ugbu a chọrọ inweta maka Chọọchị Katọlik" (June 25, 1985).
Otu esi emeri Setan:
"Childrenmụaka mara mma, yikwasị ngwa agha megide Setan ma were Rosary merie ya" (Ọgọst 8, 1985).
Etu ị gafere ule:
"Childrenmụaka m hụrụ n'anya, taa achọrọ m ịdọ unu aka na ntị na Chineke chọrọ izitere unu ule: ị nwere ike jiri ekpere merie ha" (Ọgọst 22, 1985).
Otu esi enweta nnukwu graces:
“Kpee ekpere ọkachasị n’obodo obe, nke esitere na ya nweta otuto” (Septemba 12, 1985).
Otu esi enweta onyinye dị ukwuu:
"Ọ bụrụ na ị hụrụ onye agbata obi gị n'anya, ị ga-enwe ahụ obi ike karịa Jizọs. Karịsịa na ekeresimesi, Chineke ga-enye gị onyinye dị ukwuu ma ọ bụrụ na ịrara onwe gị nye ya" (Disemba 19, 1985).
Etu ị ga-esi nata ụgwọ ọrụ si n’aka Chukwu:
“Ana m ekele gị maka obere aja ị na-achụrụ m Umu m, ụmụ, bie ndụ otu a gaa n'ihu, jirikwa ịhụnanya nyere m aka ịchụ àjà ahụ. Chukwu g’enye gi ihe onyinye a ”(Maachị 13, 1986).
Etu esi enweta amara site n'aka Jizọs:
,Mụ m, ahọtawo m gị, ma na Holy Mass Jizọs enye gị amara ya. Ya mere nọrọ ndụ Mass dị nsọ na ọbịbịa gị jupụta n'ọ joyụ zuru oke ”(Eprel 3, 1986).
Tozọ isi merie mmetụta Setan:
"Childrenmụaka m hụrụ n'anya, ọ bụ naanị site na ekpere ka unu nwere ike imeri ike ọ bụla nke Setan na ebe ị bi" (Ọgọst 7, 1986).
Otu esi enweta ọgwụgwọ site n'aka Meri:
"Childrenmụ m, kpee ekpere ka ị nwee ike ịnabata ọrịa na ahụhụ dịka Jizọs siri nabata ha. Naanị otu a ka m ga - eji ọ joyụ nye gị ikele na ịgwọ ọrịa nke Jizọs nyere m". (11 Septemba 1986).
Otu esi aghota mmemme Chineke banyere anyi:
“,Mụ m, akpọrọ m unu ka unu were obi anyị kpee ekpere; knowmaara na n’ekpeghị ekpere, ịgaghị aghọtali ihe niile Chineke na-eme site n’aka ụnụ. Ya mere kpee ekpere ”(Eprel 25, 1987).
Etu esi achọ amara n'aka Chineke:
“Dearmụ m, chọọnụ amara nile nke Chineke, nke O nyere unu site n’aka M. Adị m njikere ịrịọ Chineke arịrịọ maka ihe ọ bụla ị na-achọ, n’ihi na Chineke hapụrụ m ka m nweta amara n’aka gị” (Ọgọst 25, 1987).
Kedụ ka anyị si nweta ihe niile anyị chọrọ n’aka Jizọs:
"Childrenmụaka m hụrụ n'anya, raara onwe unu nye naanị Jizọs, ọ ga-enyekwa unu ihe niile unu na-achọ, ọ ga-ekpughere unu onwe ya nke ọma" (Septemba 25, 1987).
Otu esi enweta ima zuru oke:
“Kpee ekpere, nihi na n’ime ekpere, unu nile ga - enwe ike inweta ihunanya zuru oke” (25 Ọktoba 1987).
Etu esi azoputa ndi no n'okpuru ike nke Setan:
"Childrenmụaka m hụrụ n'anya, Setan siri ike, ọ bụ nke a ka m na-arịọ n'ekpere unu ma na-enye ha ha nye m maka ndị nọ n'okpuru ike ya, ka ha wee zọpụta unu" (February 25, 1988).
Uzo esi enweta nkasi obi n’aka Chineke:
“Rapunu onwe unu n’ebe Chineke no, ka O wee gwọọ unu, kasie gị obi ma gbaghara gị ihe niile na - egbochi gị n’ịhụnanya” (June 25, 1988).
Etu ị ga-esi nata onyinye nke ịdị nsọ:
“Chineke enyela gị onyinye nke ịdị nsọ. Kpee ekpere ka ị nwee ike ịmara ya nke ọma ma nwee ike iji ndụ gị wee gbaara Chineke akaebe ”(Septemba 25, 1988).
Uzo esi ezute Chukwu:
"N'ekpere nke obi, ị ga-ezute Chineke. Ya mere, ụmụaka, kpee ekpere, kpee ekpere, kpee ekpere" (October 25, 1989).
Otu esi ghọta ịma mma nke ndụ:
“Kpee ekpere ka ị ghọta ịdị ukwuu na ịma mma nke onyinye nke ndụ” (Jenụwarị 25, 1990).
Otu esi arụ ọrụ ebube n'ime ụwa:
“Ọ bụrụ n’ ịchọrọ, jidere Rosary; ugbua naanị Rosary nwere ike ịrụ ọrụ ebube n'ụwa na ndụ gị ”(25 Jenụwarị 1991).
Tozọ isi bie mmụọ Jizọs:
"Childrenmụ m hụrụ n'anya, ọbụna taa a na m akpọ gị oku ka ị bie ndụ obi ebere nke Jizọs n’ekpere na ịdị n'otu gị" (Machị 25, 1991).
Otu esi ahuta oru ebube n’ime ndu anyi:
“Na-ekpe ekpere ma na -ebi ozi m, ọ bụ ezie na ị ga-ahụ ọrụ ebube nke ịhụnanya Chukwu n'ime ndụ gị kwa ụbọchị” (Machị 25, 1992).
Otu esi arụ ọrụ ebube:
"Childrenmụaka m hụrụ n'anya, a na m akpọku gị taa ka imepee Chineke n'onwe gị site n'ekpere: ka mmụọ nsọ dị n'ime gị wee site na ị bido ịrụ ọrụ ebube" (25 Mee 1993).
Otu esi ghọta ihe ịrịba ama nke oge a:
"Guo Akwukwo Nso, bie ndu ya ma kpee ekpere ka ị nwee ike ighọta ihe iriba ama nke oge a" (August 25, 1993).
Uzo esi aga na Maria
"Ahụrụ m gị n'anya, yabụ ụmụaka, echefula na inweghị ekpere, ị gaghị anọ nso m" (Jenụwarị 25, 1994).
Ihe diri nke Jisos na Meri:
"Ka ị na-ekpekwu ekpere, ị ga-abụ nke m na Ọkpara m Jizọs" (June 25, 1994).
Etu aga eji mmụọ nsọ duzie:
"Childrenmụaka, echefula, ọ bụrụ na ikpeghị ekpere, ị nọghị m nso, ma ọ bụ mmụọ nsọ na-eduzi gị n'ụzọ nke ịdị nsọ" (July 25, 1994).
Etu esi achọpụta Chukwu:
Childrenmụaka, bịaruo obi m Obi ajuju, ị ga - achọpụta Chukwu ”(Nọvemba 25, 1994).
Otu esi achọpụta ịhụnanya:
Ọ bụrụ na ịhụghị Chineke n'anya mbụ, ị gaghị enwe ike ịhụ onye agbata obi gị n'anya ma ọ bụ onye ị kpọrọ asị. Ya mere, umuaka, kpenu ikpe ma site na ekpere, unu ga-ahu ima ”(Eprel 25, 1995).
Uzo esi eme ka obi bia nso na obi di Meri.
"A na m akpọku gị, ụmụ m, nyere m aka n'ekpere gị, ka iweta ọtụtụ obi dịka o kwere mee na Obi M Mepere Anya" (Mee 25, 1995).
Esi eme ka Jizọs bụrụ enyi:
“Taa a na m akpọ gị oku ka ị bịa hụ n'anya maka Sakrament dị nsọ nke ebe ịchụàjà. Childrenmụ-egwu, kpọọnụ ya, ụmụntakịrị, ma a ga-ejikọ gị na ụwa niile. Jizọs ga-abụ enyi gị ma ịgaghị ekwu okwu banyere ya dị ka onye ị na-amachaghị "(Septemba 25, 1995).
Etu ị ga --esi nweta obi anụ arụ ọ bụghị nke nkume:
"Obi unu, ụmụ m, emeghepụghịrị m kpamkpam, n'ihi nke a m na-akpọ unu òkù ọzọ imeghe onwe unu na ekpere, ka mmụọ nsọ nyere unu aka n'ekpere, ka obi unu wee bụrụ anụ arụ ọ bụghị nke nkume" (June 25, 1996) ).
Tozọ isi dị mfe nwata:
Umuaka, anamakpoku unu ozo ikpebi ekpere, nihi na n’ekpere, inwere ike ibi ndu ncheghari. Onye ọ bụla n’ime unu ga-adị, ma ọ dị mfe, yie nwatakịrị nke emegheere ịhụnanya nke Nna ahụ ”(July 5, 1996).
Otu esi amata nzube nke ndu anyi:
"Childrenmụaka, akpọrọ m gị ka ị hapụ mmehie ma nabata ekpere oge niile, ka i wee kpee ekpere mata ihe ndụ gị pụtara" (Eprel 25, 1997).
Tozọ isi mata uche Chineke:
"N’uzo puru iche, anamakpoku gi: kpee ekpere, nihi na nihi na inwere ike imeghari uche gi wee mata uche Chineke obuna n’obere ihe” (Mach 25, 1998).
Etu esi mee ka obi jupụta n’ịhụnanya:
“Childrenmụaka, unu na-achọ udo ma na-ekpekwa ekpere n’ụzọ dị iche iche, mana unu enyebeghị obi unu niile nye Chineke iji mejupụta n’ịhụnanya Ya” (Mee 25, 1999).
Nke gara aga Post Gara aga post:Nraranye nye Obi Dị Nsọ na June: ụbọchị 25
Next Post → Post ozo:June 25, 2020 bụ afọ 39 nke ngwa Medjugorje. Nso iketịbe ke akpa usen itiaba?